Yakanakisa Inofema Masking Firimu Mugadziri uye Fekitori | Aosheng
Anofema masking firimu aigona kuita kuti mota yemuviri iome mushure mekupisa kupisa. Yakajairwa masking firimu haina mweya unofema uye muviri wemota unonyorova mushure mekushisa kwakanyanya. Chigadzirwa chitsva chaizogadzirisa dambudziko rakadai.
✦ Zvinyorwa: HDPE
✦ Ruvara: Green kana vamwe.
Saizi: 4x150m, 5x120m…
✦ Kudzivirira kubva auto pamusoro pe2nd kusvibiswa.
Anofema Masking Firimu inonyanya kushandiswa kuchengetedza iyo isina kupenda chikamu panguva yekupenda mota Iyi mota pendi inofema masking firimu yaigona kuita kuti mota yemuviri iome mushure mekupisa kupisa. Yakajairwa masking firimu haina mweya unofema uye muviri wemota unonyorova mushure mekushisa kwakanyanya. Ichi chigadzirwa chitsva chinoshandiswa kugadzirisa dambudziko rakadai. Iyo ficha ndeye 100% HDPE masking firimu, ine mhando yakanaka uye yakasimba.
Iyo mukobvu kupfuura yakajairwa masking firimu uye nyore kucheka. Iyo masking firimu ine corona kurapwa, iyo inogona kupinza iyo pendi uye kudzivirira kubva kune auto pamusoro pechipiri kusvibiswa. Iyo electrostatic maitiro inoita iyo masking firimu inotora auto muviri otomatiki.
Anofema masking firimu anonyanya kushandiswa kuchengetedza iyo isina kupenda zvikamu panguva yekuita kwemota kupenda.
Iine hunhu hunogona kufema.
Hunhu hwaizoomesa muviri wemota mushure mekupenda uye pasina kunyorova.
Details: Anofema Masking Firimu
- Strong corona kurapwa.
- Yakasimba electrostatic maitiro.
- Yakakura uye yakasimba.
- Nyore kutema.
- Unyoro humbowo uye unofema.
- Yakagadzikana nharaunda.
- Ramba zvakakwirira se120 ℃.
- Yakapetwa zvakapetwa kusvika nyore kutakura saizi
1 roll / bhokisi kana 1 roll / bhegi
Masking Firimu sherefu
Pashure: Kukura Kukura Splicing Masking Firimu
Zvadaro: Coreless Masking Firimu
Coreless Masking Firimu